အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ သမင်များတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကူးစက်ခံထားရသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိ - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ သမင်များတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကူးစက်ခံထားရသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် 17-Mile Drive ရှိ ဂေါက်ကွင်းအတွင်း ပြေးလွှားနေသော သမင်တစ်ကောင်အား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
နယူးယောက်၊ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ အနောက်အလယ်ပိုင်း အိုင်အိုဝါပြည်နယ်တွင် အဖြူရောင်အမြီးရှိသော သမင်များတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရကြောင်း The New York Times သတင်းစာက လေ့လာမှုအသစ်အား ကိုးကားလျက် နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်၌ သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီအထိ ကောက်ယူထားသော သမင်နမူနာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်တွင် ကူးစက်ခံထားရကြောင်း ၊ ယင်းမှာ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွင် စိုးရိမ်နေသော ပြောင်းလဲမှုအဖြစ် သုတေသီများနှင့် ပြင်ပမှ ကျွမ်းကျင်သူများက ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်း၌ ဖော်ပြထားသည်။
ယခုမျိုးစိတ်များအကြား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရောဂါကူးစက်မှုသည် ရောဂါကူးစက်စေသောပစ္စည်းကို ဖျက်ဆီးရန် ခက်ခဲမှု မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် အကယ်၍ ၎င်းတို့က မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများကို သိုလှောင်ရာနေရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါက လူသားများထံ ပြန်လည်ကူးစက်နိုင်ကြောင်း သတင်းက ဆိုသည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက အမေရိကန်နိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ တိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုက ပြည်နယ်များစွာ၌ အမြီးဖြူ သမင်လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွင် အမေရိကန် ပြည်နယ် လေးခုရှိ သမင်ကောင်ရေထက်ဝက်အောက်၌ ဗိုင်းရပ်စ် ပဋိပစ္စည်းများ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် လေ့လာမှုသည် ရောဂါကူးစက်မှုကိုမဟုတ်ဘဲ ရောဂါတွေ့ရှိမှုကိုသာ အတည်ပြုထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သို့ရာတွင် လမ်းပေါ်မှာ သေဆုံးခြင်းနှင့် အမဲလိုက်သမားများကြောင့် သေဆုံးသွွားသော နမူနာများမှ အကျိတ်များကို စစ်ဆေးထားခြင်းဖြင့် ယခုလေ့လာဆန်းစစ်မှုအသစ်ကမူ လက်ရှိရောဂါကူးစက်မှုများကို ဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်အား peer-reviewed သိပ္ပံဂျာနယ်တွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးသော်လည်း Penn State University မှ စာရေးဆရာများနှင့် အိုင်အိုဝါရှိ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တာဝန်ရှိသူများကမူ ၎င်းရလဒ်များက သမင်အမဲလိုက်သူများနှင့် အခြားသော သမင်ကိုင်တွယ်သူများအနေဖြင့် ရောဂါကူးစက်မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုသတိပေးချက်မှာ စိုးရိမ်မှုကို ဖြစ်စေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ (Xinhua)
NEW YORK, Nov.4(Xinhua) — A large number of white-tailed deer were infected with the coronavirus in Midwestern U.S. state Iowa, reported The New York Times Tuesday, citinganew study.
Earlier this year,amultistate survey of white-tailed deer carried out by the U.S. Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Service found antibodies for the virus among less than half the deer in four U.S. states , but that study confirmed exposure, not infection..
The study has not been published inapeer-reviewed science journal yet, but its authors at Penn State University and wildlife officials in Iowa found the results so disturbing that they warns deer hunters and others who handle deer to take precautions to avoid transmission. ■
Photo taken in November 2014 showsadeer running intoagolf field on 17-Mile Drive in California, the United States. (Xinhua/Yang Lei)